Isahluko 62 | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ukuqonda intando Yami akwenziwa ukuze wazi kuphela, kodwa nokuba wenze ngokuhambisana nenhloso Yami. Abantu abayiqondi inhliziyo Yami. Uma ngithi lokhu kuyimpumalanga, kufanele bahambe bayocabanga, bezibuza, “Ngabe ngempela yimpumalanga? Kungenzeka ukuthi akuyona. Angikwazi ukukholwa kalula kangaka. Ngidinga ukuyibona ngokwami.” Nina bantu kulukhuni ukubhekana nani, futhi anazi ukuthi ukulalela kwangempela kuyini. Lapho nazi inhloso Yami khona-ke hambani niyenze ngokungangabazi—akukho sidingo sokucabanga ngayo! Nihlala nithatha engikushoyo ngokukungabaza futhi nikuqonde ngokungenangqondo, ngakho ningaba nolwazi lwangempela olunjani-ke? Anize ningafuna nhlobo ukungena emazwini Ami. Njengoba ngishilo ngaphambili, engikufisayo ngabambalwa abakhethiweyo, hhayi abantu abaningi kakhulu. Labo abangaboni kubaluleka ekungeneni emazwini Ami abafanele ukuba amabutho amahle kaKristu, kodwa kunalokho benza njengezinceku zikaSathane bese bephazamisa umsebenzi Wami. Ungacabangi ukuthi udaba oluncane lolu. Noma ngubani ophazamisa umsebenzi Wami ucasula izinqumo Zami zokuphatha, futhi nakanjani ngiyomqondisa kanzima. Lokhu kusho ukuthi, kusuka manje kuya phambili, uma ungifulathela isikhathi esithile khona-ke ukwahlulela Kwami kuyokwehlela. Uma ungakholwa amazwi Ami khona-ke kuzame futhi uzibonele, ukuze ubone isimo okuso ekuphileni ekukhanyeni kobuso Bami, nokuthi yisiphi isimo okuso lapho ungishiya.
Angesabi ukuthi awuphili emoyeni. Umsebenzi Wami uqhubekele kulesi sigaba samanje, ngakho yini ongayenza? Ngenza izinto ngokulandelana, ngakho akukho sidingo sokuthi ukhathazeke. Ngiyokwenza umsebenzi Wami Ngokwami. Lapho ngenza into ethile abantu bonke bakholwa ngokuphelele, kungenjalo ngiyobhekana nabo ngokubasola kanzima ngokwengeziwe. Lokhu kuthinta ngokwengeziwe izinqumo Zami zokuphatha. Kuyabonakala ukuthi izinqumo Zami zokuphatha seziqalile ukumenyezelwa nokwenziwa, ngeke zisafihlwa. Kufanele ukubone lokhu ngokucacile! Manje zonke izimo zimayelana nezinqumo Zami zokuphatha futhi noma ngubani ozicasulayo kufanele alahlekelwe. Lolu ngokuqinisekile akulona udaba oluncane. Ninalo ngempela ulwazi ngalokhu? Nicacelwa ngokuphelele ngale ngxenye? Manje ngiqala ukuhlanganyela: Zonke izizwe nabo bonke abantu bomhlaba baphethwe ngaphakathi kwezandla Zami futhi, kungakhathaleki okwenkolo yabo, konke kufanele kugelezele esihlalweni Sami sobukhosi. Ngempela, abanye abamukela ukwahlulela bayophonswa emgodini ongenamkhawulo (bafanelwe ukuchithakala okuyoshiswa ngokuphelele futhi kungabuye kusale), futhi abanye abamukela igama Lami emva kokwahlulelwa bayoba abantu bombuso Wami (bayothokoza kuphela iminyaka eyi-1000). Labo kinina bayophatha Nami ubukhosi kuze kube phakade emva kwalokho, futhi njengoba nihluphekile ngaphambi kwalokhu ngenxa Yami, ngiyoshintshanisa ukuhlupheka kwenu ngezibusiso engiyozinika nina ngokungapheli; labo kubantu Bami bayosala nje benzela uKristu umsebenzi. Ukuthokoza akubhekisi kuphela ekuthokozeni, kodwa kunalokho ukuthi labo bantu bavinjelwa ekwehlelweni yizinhlekelele. Kungakho manje nginezimfuneko eziqinile kinina futhi kuzo zonke izimo kuthinta umqondo ongaphakathi wezinqumo Zami zokuphatha. Ngenxa yokuthi uma ningakwamukelanga ukuqeqesha Kwami khona-ke bekungeke kube nendlela yokuba ngininike lokhu okufanele kube yifa. Noma kunje, nisesaba ukuhlupheka, nesaba amanxeba emiphefumulweni Yenu, nihlala nicabanga ngenyama futhi nihlala nizilungiselela futhi nizihlelela. Ngabe anginenzelile amalungiselelo afanele? Ngakho kungani nilokhu nizenzela amalungiselelo? Niyanginyundela! Akunjalo? Nginilungiselela into ethile kodwa niyayenqaba ngokuphelele bese nenza izinhlelo zenu.
Ningakhuluma kahle, kodwa empeleni aniyilandeli nhlobo intando Yami. Ngithi kini, ngeke neze ngithi kukhona noma yimuphi phakathi kwenu okwazi ukukhombisa ngempela ukucabangela intando Yami. Nakuba izenzo zakho zingahambisana nentando Yami ngeke neze ngikuncome. Lena yindlela Yami yokusindisa. Nakuba kunje, nisenokunganaki ngezinye izikhathi, nicabanga ukuthi niyamangalisa futhi nidelela wonke omunye umuntu. Lokhu kuyingxenye eyodwa yesimo somuntu esikhohlakele. Nonke niyalivuma leli phuzu engilikhulumayo, kodwa ngaphandle kuphela. Ukuze ngempela ukwazi ukuguquka udinga ukusondela Kimi; hlanganyela Nami futhi ngiyokunika umusa. Abanye abantu bacabanga ukuhlala bangasebenzi bese bevuna lokho abanye abakuhlwanyelile, bedinga kuphela ukwelula isandla ukuze bagqoke noma bavule imilomo yabo ukuze badle, balinde nje ukuba omunye umuntu ahlafune ukudla kwabo ngaphambi kokukufaka emilonyeni yabo ukuze bagwinye. Abantu abanjalo bayiziwula kakhulu, bathanda ukudla osekudliwe ngabanye abantu, futhi lokhu kungukubonakaliswa kwengxenye yomuntu evilapha kakhulu. Lapho uzwa la mazwi Ami, akusafanele uweqe ngaphezulu. Ngukuqaphela ngokwedlulele okuyindlela elungile. Khona-ke intando Yami inganeliswa, futhi lokhu kuwuhlobo oluhle kakhulu lokulalela.
Isahluko 31 INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi Isahluko 1 Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha